Ukugeleza nokugeleza kabusha - Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
Inqubo yokugcwala kwe-Reflow inqubo ebalulekile ukuthola ikhwalithi enhle ye-solder. Umshini we-Fumax reflow soldering une-10 temp. indawo. Silinganisela isikhathi. nsuku zonke ukuqinisekisa isikhathi esifanele.
Ukugcwalisa okokufaka okwehliswayo
Ukugcwalisa kabusha kwe-Reflow kusho ukulawula ukufudumeza ukuze kuncibilike i-solder ukufeza ukubopha unomphela phakathi kwezinto ze-elekthronikhi nebhodi lesifunda. Kunezindlela ezahlukahlukene zokuzivocavoca zokufaka okokufaka okokufaka okomlilo, njengama-oveni avuselelayo, amalambu okushisa we-infrared noma izibhamu zomoya ezishisayo.
Eminyakeni yamuva nje, ngokuthuthukiswa kwemikhiqizo ye-elekthronikhi isiya ngosayizi omncane, isisindo sokukhanya kanye nokuqina okuphezulu, ukugcwala okunamathisela kabusha kufanele kubhekane nezinselelo ezinkulu. Ukugeleza kwe-Reflow kuyadingeka ukusebenzisa izindlela zokudlulisa ukushisa okuthuthukile ukufeza ukonga amandla, ukufanisa izinga lokushisa, futhi kufanelekile ngezidingo eziya ziba nzima ze-soldering.
（1, Large lokushisa umyela, kulula ukulawula lokushisa ijika.
（2） Unamathisela we-solder ungasatshalaliswa ngokunembile, ngezikhathi ezingashisi kakhulu futhi kungenzeka ukuthi ungaxutshwa nokungcola.
（3, Ifanele ukunamathisela ngomthofu zonke izinhlobo zezinto ezinemba kakhulu nezifunwa kakhulu.
Inqubo elula engu-4, elula kanye nekhwalithi ephezulu ye-soldering.
2. Ukulungiswa komkhiqizo
Okokuqala, ukunamathisela kwe-solder kuprintwe ngokunembile ebhodini ngalinye ngokusebenzisa isikhunta se-solder paste.
Okwesibili, ingxenye ibekwa ebhodini ngomshini we-SMT.
Kuphela ngemuva kokuthi la malungiselelo elungiselelwe ngokuphelele, lapho i-soldering yangempela evuselelayo iqala khona.
Ukugcwalisa okokunamathisela ngomthofu kufanelekile ku-SMT, futhi kusebenza nomshini we-SMT. Lapho izingxenye zinamathiselwe ebhodini lesifunda, i-soldering idinga ukuqedwa ngokushisa kabusha.
4. Amandla ethu: 4 Amasethi
Umkhiqizo: JTTEA 10000 / AS-1000-1 / SALAMANDER
5. Umehluko phakathi kokufakwa kwe-wave nokugcwalisa okunamathisela ngomthofu:
（1, ukugeleza kokugeleza kusetshenziselwa ikakhulukazi izingxenye ze-chip; I-Wave soldering ikakhulukazi eyokufaka ama-plug-ins.
（2） Okokunamathisela kwe-reflow sekuvele kune-solder phambi kwesithando somlilo, futhi kuphela ukunamathisela kwe-solder okuncibilikisiwe esithandweni somlilo kwakha ilunga le-solder; I-Wave soldering yenziwa ngaphandle kwe-solder phambi kwesithando somlilo, futhi ifakwe esithandweni somlilo.
（3, ukugeleza okugeleza: izinga lokushisa eliphakeme lomoya amafomu agcwalisa i-soldering ezingxenyeni; I-Wave soldering: I-solder encibilikisiwe yakha ukugoqeka kwegagasi kuzinto.